Matongerwo eNyika, 30 Ndira 2016
Mugovera 30 Ndira 2016
Ndira 29, 2016
Kunetsana uku kwakabuda zvekare neChina apo gurukota rezvedzidzo yepamusoro soro , VaJonathan Moyo, vakakandirana makobvu nematete nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaGeorge Charamba.
Vatungamiriri wemuAfrica vanotambidzana husachigaro hweAU gore rega rega uye VaMugabe vari kutambidza husachigaro uhwu kuna VaIdris Derby vekuChad pamusango uri kuitirwa kuEthiopia.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, svondo rino vakakatyamadza mapato anopikisa pavakati vese vachauya kuzoongorora sangano sarudzo vanhu vanobva kumasangano anofarirwa nehurumende yaVa Robert Mugabe.
Ndira 28, 2016
Mutungamiri webato rePeople’s Democratic Party, Va Tendai Biti, vanoti hurumende yeZanu PF inogona kubviswa chete kana mapato anopikisa akabatana kuitira kuti atorere bato riri kutonga masimba.
Amai Dongo vanoti vanofunga kuti imba yavo yakaita zvekupiswa nevanhu sezvo chiutsi chakabuda mumoto uyu chakanga chakasimba zvikuru uye chichikachidza
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutungamiri we Equatorial Guinea, VaTeodoro Obiang Nguema Mbasogo, vave nehushamwari hwebhande nebhurugwa.
Misoro yeNhau, China Ndira 28, 2016
Ndira 27, 2016
Misoro yeNhau yeShona – Ndira, Chitatu 27, 2016
Dutumupengo reChando Rinosiya Ravhiringa Matunhu Akawanda muAmerica
Dutumupengo rine chandomupengo rinonzi Jonas raive nemhepo yaidarika makiromita makumi masere paawa rakavhiringa matunhu akawanda muAmerica, izvo zvakasiya matunhu aya achinetsekana nemirwi nemirwi yechando
VaBiti Vopikisa Mutemo Unogarisa Musungwa Mujeri Kudzamara Afa
Chikumbiro ichi chakasvitswa nemumwe musungwa, Obediah Makoni, uyo akatongwera kugera mujeri kwehupenyu hwese mushure mekubatwa nemhosva yekuponda muna 1995.
Hurumende Yopa Zvakare Varimi Vachena Matsamba eKurima
Mushure mekuona kuti zvinhu zviri kuramba zvichiondomoka munyaya dzechikafu, hurumende inonzi yakazodzora mwoyo ndokutanga kupa varimi vechichena vakambenge vadzingwa pamapurazi avo mvumo yekuti vatange zvakare kurima